သာဓု ခေါ်လိုက်ယုံနဲ့ ရလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ – BaHuTuTa
သာဓုခေါ်ရင် ဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့ သိနိုင်ဖို့ မျှဝေပါတယ်နော်..ဘုန်းဘုန်းဘုရားရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ဘုန်းဘုန်းတွေရဲ့ တရားဆုံးတဲ့ အခါဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခု လှူရင်ဖြစ်စေ၊
သူများက အမျှဝေရင်ဖြစ်စေပရိသတ် က သာဓုခေါ်ကြပါသည်။ ဘာကြောင့် သာဓုခေါ်ပါသနည်း။ဗုဒ္ဓလက်ထက်က အဲဒီလို သာဓုခေါ်ကြပါသလား။ သာဓုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း သိလိုပါသည်။ သာဓုခေါ်ရင် ဘယ်လို အကျိုး ကုသိုလ် ရပါသနည်း။ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါသည် အရှင်ဘုရား။နိုနိုအေး
ရှည်လှသာဓု…ရက်ကန်းသည် မိန်းကလေးကို ဗုဒ္ဓက ‘ဘယ်က လာသလဲ’မေးတော့ ‘မသိပါ’လို့ ဖြေတဲ့အခါ ဗုဒ္ဓက‘သာဓု သာဓု မိန်း ကလေး .. ငါဘုရား မေးတာကို သင် ဖြေနိုင် ပေတယ်’လို့ မိန့်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ကြားဖူးမှာပေါ့။ ဗုဒ္ဓကိုယ် တိုင်နဲ့ အခြားသော ရဟန္တာကြီးတွေဟာ ဓမ္မနဲ့ပတ် သက်ပြီး နှစ်သက် သဘောကျတဲ့အခါ အဲဒီလို သာဓုခေါ်ကြကြောင်း ဗုဒ္ဓစာပေမှာ သာဓကတွေ အများကြီး ရှိတယ်။
ဗုဒ္ဓ လက်ထက်ကပင် သာဓုရှိလို့ သာဓုရဲ့ သမိုင်းကြောင်းက ရှည်လှပြီ။ ဗုဒ္ဓ သာသနာ သမိုင်းနဲ့ ထပ်တူပါပဲ။ သာဓုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ‘ကောင်းစွ’လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ် သက်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကို အင်္ဂလိပ်လို ‘Good! Great! Excellent! ဆိုတဲ့ အာမေဍိတ်မျိုး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လေယူ လေသိမ်း အသံအနိမ့် အမြင့်ပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းငယ် ခြားနားမှုလည်း ရှိနိုင်ကောင်းပါတယ်။
ဆင့်ကမ်းသာဓု..သာဓုသံမှာ ‘အချွန် နှစ်ခွပါတဲ့ ဓားမြှောင်တွေနဲ့ အစွန်းရောက် အယူသည်း အကြမ်းဖက် စစ်သွေးကြွဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာဖို့ လူတွေကို လုံးဝ မသင်ကြားတဲ့အပြင် သမိုင်းတစ် လျှောက်လုံး သာဓုသံကြောင့် သွေးမြေကျရတဲ့ မှတ်တမ်း မရှိခဲ့ဖူးလို့ ယနေ့ခေတ်မှာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ရဲတဲ့ ပညာတတ် လူတန်းစားတွေဟာ ငွေပေးပြီး မစည်းရုံးရဘဲ ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် သာဓုခေါ်နေကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့မတူသူ အားလုံးနဲ့ အတူတူ နေနိုင်ဖို့ ဆုံးမတဲ့ သာဓုသံဟာ ချိုးဖြူ တောင်ပံ ခတ်သံပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။
သူများတို့က အားမတန်သေးလို့ လူသူ မကြားအောင် ကိုယ့်အဆောင်ထဲမှာပဲ ကျိတ်ပြီး ကလေးတွေကို အပတ်စဉ် စုရုံး သင်ကြား လေ့ကျင့် လှုံ့နေကြဆဲမှာ ကိုယ်က အဖိုးအို အဖွားအိုတွေ အီမိုးရှင်းနဲ့ သာဓုခေါ်အောင် ‘လမ်းလေးခွ ဆုံရာမှာ’ အော်လန်ကြီးနဲ့ ‘သတည်းချ’ နေရင် အကျိုးမများနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သာဓုသံကို ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားစေရမယ် ဆိုတဲ့ နိုးကြားတဲ့ အသိ စိတ်ကိုသာ ယနေ့ကစပြီး လျောင်း ထိုင် ရပ်သွား ဣရိယာပုထ် လေးပါးလုံးမှာ မပျင်းမရိ အရေးတကြီး အပူတပြင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပွားများပါလေ။
ကြီးမြတ်သာဓု…ဗုဒ္ဓလက်ထက် သာဝတ္ထိမြို့က ချမ်းသာတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ဇနီးချောကိုစွန့်ပြီး ရဟန်းပြုသွားတယ်။ ပိုင်ရှင်မဲ့ အဲဒီ အမျိုးသမီးကို မုတ်ဆိတ်မွှေး ထူလပျစ်ကြီးနဲ့ (လို့ယူဆရတဲ့) ဘုရင် ကောသလက သိမ်းပိုက် လိုက်တယ်။ တစ်နေ့မှာ ဘုရင်ဟာ ပန်းကလပ်ထဲမှာ ကြာညိုပန်းတွေ ထည့်ပြီးနန်းတွင်းသူ တစ်ယောက်ကို တစ်ပွင့်စီ ဝေငှပေမယ့် အဲဒီ အမျိုးသမီးက နှစ်ပွင့် ရသွားသတဲ့။
ဘုရင်ရဲ့ ရိုမန်တစ် ဆန်ဆန် လုပ်ရပ်ကြောင့် အမျိုးသမီးက ပျော်ပုံပြပြီးမှ ငိုပြန်တဲ့အခါ ဘုရင်က စစ်မေးတော့‘ပျော်တာ နှစ်ပွင့်ရလို့ ငိုတာ ခင်ပွန်းဟောင်းရဲ့ ခံတွင်းက ထွက်တဲ့ ကြာညိုပန်းနံ့ကို အမှတ်ရလို့’တဲ့။ဘုရင်က မယုံလို့ အဲဒီ ရဟန်းကို တရားဟောခိုင်း၊ အခန်းတစ်ခုလုံး ကြညိုပန်းနံ့ သင်းသွားတော့မှ ယုံသွားပြီးဒီကိစ္စကို မြတ်စွာဘုရားကို မေးလျှောက်တဲ့အခါ အဲဒီရဟန်းဟာ အတိတ်ဘဝက တရားနာစဉ် ရိုရိုသေသေနဲ့ သာဓုခေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ထူးကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူတယ် (အံ-ဋ္ဌ ၁၊ ၂၂)။
သဒ္ဓမ္မဒေသနာကာလေ၊သာဓုသာဓူတိ ဘာသေတာ။ မုခတော ဇာယတေ ဂန္ဓော၊ ဥပ္ပလံဝ ယေထာဒေက။တရားနာစဉ် ဝမ်းမြောက်ရွှင် နှုတ်တွင်သာဓု ခေါ်ပါလေ။ ခေါ်သူ့ခံတွင်း ကြာနံ့သင်း မပျင်းမရိ လုပ်ပါလေ။